Kedu ka esi ekpuchi ụlọ site na oyi na-atụ n'oge oyi? | Green Renewables
nkpagbu | | Omenala ulo
Oge ọ bụla oge oyi na-abịaru nso, oge oyi na obere okpomọkụ na-abịa. Ihe na-egosi mgbanwe n'usoro nke ndị mmadụ ma n'ime ma n'èzí ụlọ. Anyị si n'ịnọ na mbara ala gaa na-ekiri ihe nkiri na sofa. Na kpọmkwem ebe a bụ kit nke ajụjụ ahụ, ebe ọ bụ enwere oge na anyị anaghị enweta okpomọkụ kwesịrị ekwesị iji mee ka ụlọ ahụ kpoo ọkụ. N'ihi nke a, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ụfọdụ ị ga-eburu n'uche ka ị mee ka ụlọ gị dịpụrụ adịpụ na oyi n'oge a.
Ihe mbụ na-abata n'uche bụ ihe eji arụ ụlọ ahụ. N'ihi ya, mkpuchi nke elu ụlọ na mgbidi nwere ihe dị iche iche dị ka okwuchi, owu a rụgharịrị arụgharị, ụfụfụ na-efe efe na ọbụna fiberglass dị mkpa pụrụ iche.
Isi ihe ọzọ bụ windo. Iji gbochie oyi ịba site na ha, ọ dị mkpa na windo ndị dị elu. Ma ọ bụghị ya, a ga-eji ụfọdụ ihe mee ihe. Dịka ọmụmaatụ, tinye silicone gburugburu oghere windo iji gbochie ntinye oyi ma ọ bụ tinye ụfụfụ n'etiti windo n'onwe ya na mgbidi ụlọ iji mechie mgbawa.
Ị ga-ekpuchi oghere nke igbe nke ihe mkpuchi nwere na teepu mkpuchi n'ihi na, ma ọ bụghị ya, ikuku ga-abanye dị ka a ga-asị na ọ dịghị echi.
Ihe ndị ọzọ na-abata mgbe a na-ekpuchi ụlọ bụ:
ụdị ụlọ: ala mbụ, penthouse, duplex ma ọ bụ chalet
nha ụlọ, ya bụ, square mita nke o nwere
ebe obibi, ya bụ, ọ bụrụ na ọ dị n'akụkụ nkuku ụlọ ma ọ bụ na e nwere ụlọ dị n'akụkụ
Ngwongwo, akwa akwa, na ákwà mgbochi na-enyekwara aka imechi ụlọ ahụ. O doro anya na ọ bụrụ na ụlọ ahụ dị ọhụrụ ma na-ejibeghị ụdị ihe eji achọ mma, okpomọkụ ga-adị ala. Ọ bụ ezie na nke ahụ ga-adaberekwa n'ụdị kpo oku dị n'ụlọ, ihe anyị na-enwekarị nchegbu banyere ya n'ụba ma ọ bụrụ na anyị nwere ike chekwaa na ụgwọ ahụ na ngwụcha ọnwa. Ma ọ bụghị otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ usoro ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke a ga-eme ka a na-etinye uche nke okpomọkụ n'ime awa ndị a na-agbanye. Otú ọ dị, ọ bụrụ na usoro ahụ bụ nke ezinụlọ n'otu n'otu, ezinụlọ ọ bụla ga-abụ onye ga-ahọrọ ọnọdụ okpomọkụ kachasị mma maka ụlọ ha na oge kachasị mma na-akwụghachi ha ụgwọ ịgbanye ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Kedu ka esi ekpuchi ụlọ site na oyi na-atụ n'oge oyi?
akụkụ nke cell